Ezigbo okwu: Mee, Soro, Nnwale, ma nyochaa Mmemme Ntuziaka maka Ecommerce | Martech Zone
Dị ka Okwu nke Marketingtù Na-ere Ọnụ n'Ọnụ na-akọ na kwa ụbọchị na United States, a na-enwe ihe dị ka ijeri mkparịta ụka metụtara ijeri 2.4. Dị ka Nielsen si kwuo, 90% nke ndị mmadụ tụkwasịrị obi na azụmaahịa site n’aka onye ha maara
Omume ịzụ ihe emetụtawo mmekọrịta mmadụ na ibe ya kemgbe mmalite oge. Ogologo oge tupu netwọkụ mmekọrịta dịka Facebook na Twitter debere gị na akaghị aka, netwọkụ anụ ahụ gị nwere mmetụta na ihe ịzụrụ na ebe ị si zụta ya. N’ezie, ikwu okwu ọnụ bụ ike kasị dị ike n’ịchụ ahịa ọhụrụ. Ihe kpatara ya bụ na ndị enyi gị maara ihe ị chọrọ ịzụ, mgbe ị chọrọ ịzụ ya, na otu esi ere ya. Kwuru okwu
Okwu a na-ekwu okwu na-enyere ụlọ ọrụ Ecommerce aka inweta ndị ahịa ọhụụ na ịbawanye ahịa
Mee customizable Gwa a mmemme Enyi. Ebe a na-ekwu okwu na Talkable bụ nke na-agbanwe agbanwe n'ihe gbasara ndị mkpọsa a na-achọ, etu o si dị, ndị na-enweta ụgwọ ọrụ, na etu esi akwụ ha.
track nzụta saịtị ọ bụla na òkè ndị ahịa iji kwụghachi ndị na-akwado na ndị enyi ụgwọ naanị mgbe ha zutere usoro mgbasa ozi akọwapụtara.
ule awade ka jirichaa Ntuziaka mmemme arụmọrụ. Dị ga-ahụ nguzozi zuru oke n'etiti ogo onyinye na ọnụ ọgụgụ ahịa e mepụtara. Ikpo okwu na-enyekwa gị ohere nyocha A / B, nnomi, na onye ọrụ na-asọ.
Tụlee nzọụkwụ ọ bụla nke olulu; site na mbak ka ịpị aka na nleta saịtị na ịzụrụ. Talkable na-enye data ntinye aka ị nwere ike ịtụkwasị obi.
Talkable nwere ntinye otu ọpịpị na Shopify, Magento, na Demandware. Y’oburu n’eji uzo ahia e-commerce di iche, Talkable nwere akwukwo ederede.
Chọrọ ozi ndị ọzọ? Talkable ebipụtala akwụkwọ nta banyere Ntughari Mgbasa Ozi akpọrọ Site na Sayensị Ka Purzụta, yana ozi banyere ihe ahịa azụmaahịa bụ, gịnị kpatara na ọ dị oke mma, ego ole ị ga-akwụ maka ndị na-ezigara gị, yana otu ị ga-esi wuo usoro azụmaahịa ịga nke ọma.
Download Si na Sayensị Zụrụ
Tags: APINchọpụtaebooknkwupụta ecommercesite na sayensi ịzụtaakwukwomagentoOzi Ntuziakaahịa ahịaOzi Ntuziakaụlọ ahịaokwuAkwụkwọ edemede